Guide Quick: Sida loo Travel Cinque Terre By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Guide Quick: Sida loo Travel Cinque Terre By tareenka
Italy waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan meelaha dalxiiska dunida oo dhan. Dadka soo jabay dalka cunto fantastic, dhaqanka, iyo taariikhda hodanka ah. Dhab ahaan, xitaa uma baahnid in aad si ay u booqdaan magaalooyinka waaweyn si ay u dareemaan qardhaasaha ee Italy. Tusaale wanaagsan yahay of this waa stretch ku duufso ah Riviera Talyaani loo yaqaan Cinque Terre. Waa caga caan loogu talagalay dadka doonaya in ay ku raaxaystaan ​​xeebaha Mediterranean iyo goostay ka xawaaraha walaac nolosha casriga ah. Inkasta oo ay jiraan wax badan oo ka mid ah magaalooyinka iyo tuulooyinka oo go'doonsan on soohdimaha Italy, magaalooyinka Cinque Terre yihiin kuwa ugu caansan. Sababo la xiriira danaha in this caga fantastic, Save A tareenka Waxay isu diyaariyeen hage deg-deg ah oo ku saabsan sida loo arko Cinque Terre ee Train.
Maxaad Go By tareenka?
dalxiisayaal badan oo aan booqday Cinque Terre la yaabanahay sababta laga yaabo tareen waa ikhtiyaarka ugu fiican. Kiraysiga baabuur iyo baabuur-wadidda in ay gobolka nabad this wanaagsan codadka, xaq u? Wrong. Si loo fahmo sababta in ay suurto gal ma aha, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado waxa ay ka dhigeysaa ilaa Cinque Terre. Cinque Terre ugu horayn waxa ka kooban shan tuulo kalluumaysiga, Halkan magaca (shan dalalkan). tuulooyinka Kuwanu waa Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, iyo Monterosso al Mare. Waxay ahaayeen asal ahaan shan iyo Daar wayn leh bulshooyinka yar ku wareegsan. si ay u noolaadaan, tuulooyinka, kuwaas oo ka qayb qaatay kalluumaysiga iyo beeraha. tuulooyinka ahaayeen, ilaa dhawaan, ku xiran by Waddooyinkiisa tug oo waxay ahaayeen kaliya la heli karo by rail ama badda.
tuulooyinka Kuwani ma aha in go'doomin sidii ay ahaayeen sano ka hor. Si kastaba ha ahaatee, ay weli sii wado dareen fog in dad badan oo ku raaxaysan. Waddooyinka yihiin taasoo keentay in qaar ka mid ah tuulooyinka hadda, laakiin waxay yihiin kuwo aad u cidhiidhi ah iyo waxay noqon kartaa safar halis u ah kuwa ku cusub tahay waddooyinka. Haddii aad gaadhaan tuulooyinka baabuur by, ma aad awoodi doonaan in ay u safraan u dhaxeeya baabuur by. Si looga fogaado wax kasta oo khatar iyo dhib, waxaa fiican in ay soo booqdaan tuulooyinka nidaamka ugu haboon ee tareenada gaadiidka.
Waxa Aad Fili Karaa From Terre Tareen Line Cinque The?
The line tareen Cinque Terre ayaa lix joogsato. Amarka ka mid ah joogsiyada waa La Spezia (xarun gaadiidka dhexe ee degaanka), Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, oo markaas ugu dambeyntii Levanto. safarada Kuwanu waa gaaban oo aadan qaadan waqti in badan. Safarku wuxuu ka La Spezia in Riomaggiore qaadataa 10 daqiiqo. safarada u dhexeeya magaalooyinka Cinque Terre ku saabsan tahay 5 daqiiqo kasta. tareenada Kuwani maraan sugnan mugdi ah in taariikhda dib u 1870s ah. Waa waayo aragnimo xiiso leh of maraya mugdi ah ka dibna si lama filaan ah u arkay oo nuurka iyo views qeybalay ee Badda Dhexe.
tareenada Hadalladaasu ma aha kuwa sida joogtada ah sida mid la fisho in la siin lahaa meel fog gaaban u dhexeeya dalal ka. sida caadiga ah waxay u ordaan mar saacad kasta, laakiin tani waxay ku kala duwanaan karaan waqti ka waqti. Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer waxaa fiican inaad weydiiso macluumaad dheeraad ah marka iibsiga tigidhka. Waxa intaa dheer in garanaysaan wakhtiga jadwalka iyo safarka of this ee wadada tareenka, waxaa muhiim ah si loo ansixiyo tigidhada aad. Waxaa jira mashiinada ansaxinta ku dhufto ee tareenka in aad isticmaali kartaa. All inaad sameyso waa simbiriirixan dhamaadka cidhiidhi ah ee tigidh galay Afyare ee mashiinka huruud yar oo ay sugaan in la maqlo shaambadda.
1. Quick Guide Si Cinque Terre By tareenka: Riomaggiore
Riomaggiore noqon doonaa stop ugu horeysay (haddii aad madax ka La Spezia) ama stop shanaad (haddii aad madax ka Levanto). Si kastaba ha ahaatee, waxaa ay u badan tahay ay noqon stop ugu horeysay ee ay dad badan oo soo booqda Cinque Terre, maadaama ay tahay jidka ugu dhakhsaha badan waxaa heli. Riomaggiore waa ugu weyn oo ka mid ah shan tuulo, iyo waa caasimadda aan rasmi ahayn tan xafiiska ugu weyn ee park jiro. dhismayaasha ayaa la Shaad oo dhan kanaal yaacday, jidka loo dekedda yar oo dhan. goobta hoolmay guryaha pastel waa picturesque iyo weligiisba joogi doonaa in xasuustaada. Waxaa hortiisa fantastik ah in la arko qorrax dhaca, oo waa a waa in uu arko laba qof doonaya in ay wadaagaan waqti gaar ah.
La Spezia in Tareenadu Riomaggiore
Florence si Tareenadu Riomaggiore
Modena in Tareenadu Riomaggiore
Livorno in Tareenadu Riomaggiore
Manarola waa tuulada Petit u muuqata in daadan hoos gelin xeebaha Cinque Terre arko koowaad a. khayaal ee fatahmaan dhismayaasha midabo waa a hortiisa qurux badan. Waa boorish kaamil ah dhaqanka Talyaani iyo dabeecadda Patriots a. Marka aad qaadato aragtida ah loo jecel yahay, aad sahamin karaan tuulada. Manarola leedahay deked yar in qoreysa sagxada doon iyo godka dabaasha ah. waa meel ku fiican in ay qaataan dabbaasha iyo dhaqmaan qaar ka boodo gabiga. Socda dekedda waxaa doonyo kalluumaysi oo badan ay leeyihiin deggan Manarola. xeerkii qaadaan iyo cunista kalluunka weli waa nool yahay iyo sii xoogaysanaya ee tuulada.
La Spezia in Tareenadu Manarola
Riomaggiore in Tareenadu Manarola
Sarzana in Tareenadu Manarola
Levanto in Tareenadu Manarola
3. Quick Guide Si Cinque Terre By tareenka: Corniglia
Mid kasta oo ka mid ah shan tuulo leeyahay jiidashada gaar ah. Corniglia waa gaar ah tan iyo markii ay ma aha on xeebta ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa ka maqan ee xeebaha, waxaa in ka badan ka dhigaysa ilaa waayo quruxdiisa gaar ah u gaar ah. Corniglia waxay dareemeysaa meel ka fog kii hore tuulooyin kale. Si kastaba ha ahaatee, waxay bixisaa jawi more dabacsan iyo kuwa maxalliga ah. Tuulada waxaa inta badan iska fududaysto, waayo, xusus ay hareen. Si ka duwan tuulooyinka kale ee lagu tagi karaa doon, Corniglia waa on top of kuraha iyo ma laha helitaanka badda. Habka keliya ee lagu gaari waa in tug ah Jidka Cinque Terre ama in tareenka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in tareenka aan kuu tudhi maayo wax kasta oo dadaal jireed. Waxaad wali u baahan doontaa inaad jaranjarooyinka qaar aado si aad u gaadho xarunta tuulada oo aad u aragto waxkasta oo ay tuuladu siiso.
Corniglia uu leeyahay aragti fantastik kuu oggolaanaysa in aad aragto ugu buuraha ku xeeran iyo Badda badan. Belvedere The tuulada waa meel fiican si ay u tagaan, oo waxay qaadan quruxda Cinque Terre. Marka aad samayn in aad ku raaxaysan karaan dhadhan ah dalabyo tuulada, ka basiilka la yaab leh inay khamri delicious. Corniglia leedahay taariikh qani ku ah samaynta khamri, iyo haddii aad tahay ku filan nasiib saaxiibin dadka deegaanka, waxaad dhadhamin karo oo ku bartaan oo ku saabsan khamri raagay oo ay.
La Spezia in Tareenadu Corniglia
Florence si Tareenadu Corniglia
Manarola in Tareenadu Corniglia
Levant in ay Tareenadu Corniglia
Vernazza waxaa loo arkaa mid ka mid ah tuulooyinka qurux badan ma aha oo kaliya Cinque Terre ugu, laakiin wadanka oo dhan Italy. Waxaa hubaal waa jawharad koraysa ee Cinque Terre ka dhigaya dad badan ay ku dhacaan in jacayl la safarka. Waxay leedahay dareento more xarrago iyo dhaqanka in tuulooyinka kale ee ka maqan. Isku in cuntada gaarka ah iyo indhaha cajiib ah, oo aad boos ka helin in damaanad booqashada labaad. Hubi inaad soo booqato qalcaddii Doria marka in Vernazza. Waxaa ku jira mid ka mid ah munaaradaha asalka ah ee la soo dhaafay in dadka sano ee tuulada la ilaaliyo ka hor.
Corniglia in Tareenadu Vernazza
Florence si Tareenadu Vernazza
Bologna si ay Tareenadu Vernazza
Riomaggiore in Tareenadu Vernazza
5. Quick Guide Si Cinque Terre By tareenka: Monterosso Al Mare
Monterosso al Mare shaki la'aan waa touristy ugu noqosho iyo sida magaalada ee Terre Cinque ah. Waxay leedahay baabuur, hotels iyo xeebaha dhagax dixeed fiican ee dalxiisayaasha. Haddii aad rabto in aad soo booqato qayb ka this ee Italy cajiib ah, laakiin door bidaan vibe dheeraad ah oo casri ah, markaas Monterosso waxaa loogu talagalay adiga. Monterosso ayaa wareeg ah oo waa kaamil for tamashlayn fiidkii, iyo xataa si fiican, waxay leeyihiin cuntada wanaagsan in dhigi doonaa qof kasta oo ku raaxaysan cuntada badda.
Rome si ay Tareenadu Tivoli
Tivoli in Tareenadu Rome
Perugia in Tareenadu Tivoli
Orvieto in Tareenadu Tivoli
Sida aad u jeeddo, Cinque Terre leedahay wax badan oo ay u soo bandhigtay kooxda martida doonaya in ay la kulmaan waayo aragnimo gaar ah Talyaani. Waxay leedahay shan tuulo oo u gaar ah in yabooho waayo-aragnimo ah la ilaawi karin. Book A Ticket aad tareenka oo iska daa naftaada inaad la kulanto khibrad ka duwan tan kale.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Guide Quick: Sida loo Travel Cinque Terre By tareenka” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-travel-cinque-terre-train/ – (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
cinqueterre europetrains europetravel eurotrip trainjourney Tranride talooyin tareenka travelitaly